Wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland oo la dar dar gelinayo - Halbeeg News
Wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland oo la dar dar gelinayo
MUQDISHO(HALBEEG)-Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la dardargelinayo wada hadallada u dhexeeya Soomaaliya iyo Somaliland si looga shaqeeyo midnimada ummadda Soomaaliyeed.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda Batroolka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal ayaa sheegay in kulankii golaha wasiirada lagu soo bandhigay in la ilaaliyo midnimada ummadda Soomaaliyeed islamarkana la dardargeliyo wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland.
“Arrimaha shirka golaha wasiirrada la horkeenay waxaa ka mid ah in la ilaaliyo midnimadda ummadda Soomaaliyeed, islamarkana la dardargeliyo wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland”ayuu yiri wasiir ku xigeenka Batroolka Soomaaliya.
Wada hadallada u dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa dhowr mar lagu qabtay dalalka Turkiga iyo Jabuuti,laakin weli wax natiija ah kama soo bixin ilaa hadda.
Somaliland ayaa sannadkii 1991 ku dhawaaqday inay ka go’day Soomaaliya inteeda kale.
Ciidamada dowladda iyo AMISOM oo howlgallo ka wada Shabeellaha hoose
Ciidamo boolis ah oo Baydhaba la geeyay